Itoophiyaa - Oromia Broadcasting Network - OBN
Oromia Broadcasting Network - OBN / Itoophiyaa
It could be a story that is simply of wide interes ...
Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda ...
Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorra ...
1. Obbo Haaylaay Biraanee Tasammaa; ministir deett ...
About Us OBN provides audiences in the Oromia with ...
Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 0 ...
What we follow in our working practice. Why do I n ...
Ilkaan keenya midhagina isaa akkuma qabatetti akka ...
Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009 Waancaa Li ...
Ajjeechaa Kaashogjii: Saawudiin gaaffii shakkama Turkii gaafattee
Adeel al-Jubiir akkas jedhan: “Nuti lammileen keen ...
Host Live deebii fi
Oduu, Xiinxalaa fi Odeeffannoo adda addaa
This week, police respond to
Yuunvarsiitin Finfinneen Proofeesar Asmaroom Laggasaaf
‘YouTube’ irratti daa’imni	December 20, 2018
Dolaara miliyoona 22 argachuudhaan daa’imni waggaa torbaa ashaangulliota (toy) keessa deebiyee ilaalu tokkomucaa YouTube irratti nama hundaa ol argatu ta’een beekameera. Akka barruun Foorbiis argadhe jedutti daa’immni Ryan jedhamu Ryan ToysReview nama v Jake Paul jedhamuun dolaara 500,000 caaleera. Viidiyoowwan guyyaa guyyaan kan fuula You Tube irratti ba’an yommuu ta’u kan mata duree blue giant myself jedhu fuula Ryan qabatee bahe Dilbata kaleessaa irraa eegalee si’a miliyoona daawwatameera. Dude Perfect channel kan jedhamu ammoo dolaara miliyoona 20 argachuudhaan sadaffaadha jedheera Foorbiis. Ijoolleen maaliif viidiyoo isaa kana jaallatu jedhamee NBC irratti gaafatamee, sababiin isaan jaallataniif ani waanan […]Read more...
Dubartii maallaqa seeraan	December 07, 2018
Maallaqa seeraan ala daddabarsuun dubartii shakkamte to’achuudhaaf jecha xiyyaarri sa’aatii sadiif balali’e akka deebi’ee qubatu taasifamu Ministeerri galii beeksiseera. Ministeerri Galii akka FBC’f ibsetti, dheengadda halkan hojjetaan Daandii Xiyyaara Itoophiyaa mirga sakata’amuu dhabuu isaa fayyadamuudhaan dubartii gara Chaayinaatti imalaa turte tokkotti maallaqa biyyoota gara garaa of keessaa qabu hedduu sarara sakkatta’insaa darbee itti kenne. Haata’u malee, hojjetoonni Daandii Xiyyaaraa kana arganiifi hojjetoonni gumuruk shaanxaa dubartii gara Chaayinaatti imaltu kanatti kenname kana fuudhuudhaan sakatta’an. Hojjetoonni Daandii Xiyyaraafi Gumuruuk kun erga waliin shaanxaa sana sakata’anii booda shaanxicha keessa paawondii 6,170 Yuuroo 33,115 birrii Itoophiyaa 1,264,975 arganii hojjetaa kana to’annaa jala oolchan. Hojjetaan […]Read more...
Ameerikaan ergama dipiloomaasii	December 19, 2018
Walittii dhufeenyi dipiloomaasii jalqabaa Ameerikaan Somaliiyaa waliin qabdu waggaa gara 30f ture. Ministeerri haajaa Alaa Ameerikaa ‘taateen seena qabeessi’ kun jijjiirama guddaa biyyootiin baha Afrikaa fidan agarsiisa jedhu.Ambaasaaddar Doonaald Yamamooto imbaasii Moqaadishoo keessaa ni hoogganu. Kanaan dura imbaasiin kun Nayiroobii, Keeniyaa keessa ture.Ameerikaan imbaasiishee kan cufte bara 1991 yeroo mootummaafi finciltoota gidduutti lolli tureetti. “Gochi seena qabeessi kun foyya’iinsa Somaliyaan waggooti darban keessatti agarsiiste ibsa.” “Akkasumas sochii dipiloomaasii Ameerikaan Moqaadishuu keessaatti qabdu ture kan sadarkaa biraatti guddisudha” jechuun dhimma kanarratti dubbii himtuun ministeera haja alaa Heather Nauert dubbateetti. Al-shabaab ammas sodaachisaa ta’us eegumsi Moqaadishoo keessa jiru foyya’eera. Hagayya 2011 keessa […]Read more...
Walittii dhufeenyi dipiloomaasii	December 19, 2018
Walittii dhufeenyi dipiloomaasii jalqabaa Ameerikaan Somaliiyaa waliin qabdu waggaa gara 30f ture. – EngishRead more...
Raashiyaan misaa’ela akka	December 19, 2018
Ibsi kun kan ba’e Kibxata Raashiyaan waligaltee Humnoota Nukileera Fageenya- gidduugaleessaa (INF) diigdetti jechuun himannaa dhaabbanni ‘Nato’ dhiyeesseen booda. Bara 1987tti Ameerikaafi USSR gidduutti waliigalteen mallatteeffame kun biyyoonni lamaan misaa’eloota fageenya dhiyoofi gidduugaleessa akka hin fayyadamne kan dhorku dha. Pireezidaant Puutin himannaan kun Ameerikaan waliigaltee dhiisuu akka yaaddu agarsiisa jedha. Pireezidaantiin Raashiyaa waliigaltee INF irrattii meeshaalee waraanaa dhorkaman ijaaraniiru jechuun ibsa televizhiiniin darbe irratti dubbateera. “Amma waayilli keenya Ameerikaan haalooti waan geddarameef meeshaa akkasii qabachuu qabna jedhani kan amanan fakkaata,” jedhe. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaan dura sababa gocha Raashiyaatiin biyyittiin waliigaltee kana ni dhiifti jedhee dubbateera. Kibxata gurmiin […]Read more...
Hosted by Zinabu Damte
Zinabu Asrat bring you the news that matters to you!
It could be a story that is simply of wide interest to viewers and has little impact otherwise. Many times, breaking news is used after the news organization has already reported on the story. Government…
Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda kilabicha gadhiise. Kilabichi ibsa baasen Joosee Moriinon turtii kilabichaa keessatti tajaajila kenna turaniif galateeffachuun, gara fuula duraattis carraa…
This Year : 11427
Total Visit : 200998
Total Hits : 53889